DEG DEG: Aqalka Sare ee Itoobiya oo amray in Maamul KMG ah loo dhiso Maamul-goboleedka Tigraay | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DEG DEG: Aqalka Sare ee Itoobiya oo amray in Maamul KMG ah...
DEG DEG: Aqalka Sare ee Itoobiya oo amray in Maamul KMG ah loo dhiso Maamul-goboleedka Tigraay
(Mekelle) 07 Nof 2020 – Baarlamanka Federaalka ah ee Itoobiya ayaa u codeeyey in Maamul-goboleed KMG ah laga dhiso Gobolka Tigraay oo bartamihii todobaadkan laga bilaabay duullaan lagu hayo maamulkaasi.
Aqalka Federayshinka Itoobiya, ama Aqalka Sare, ayaa go’aankaa kasoo saaray kulan aan caadi ahayn kaddib markii uu RW Abiy Ahmed ku dhawaaqay tillaabada millateri, iyagoo sheegay inuu sidaa qabo Qodobka 14 (2) ee baaqa La. 359/95.
Waxay tani ka dhigan tahay in maamulkii lagu doortay doorashadii ugu dambeysey ee Sebtembar oo iskugu jirey fulin iyo sharci dejin aysan raalli ka ahayn DF Itoobiya, laga soo qaadi doono wax aan jirin.
Waxaa horay loogu soo rogey 6-bilood oo xaalad deg deg ah, gobolkan woqooyi oo ay xukumaan TPLF oo ku dhowaad 3 toban sanaale xukumayey Itoobiya.
DF Itoobiya ayaa sheegtay inay weerarka qaadday kaddib markii ay TPLF weerar ku qaadday Taliska Woqooyi ee millateriga Itoobiya, iyagoo bililiqaystay hub culus oo ay ku jiraan kuwo gaari kara 300 km (186 mayl).
Previous articleXiddig caalami ah oo Barcelona & Arsenal u safan jirey oo ku biiray koox ka dhisan Jabuuti
Next articleTOOS u daawo: Everton vs Man United – LIVE (Shaxda Sugan)